Article – Page3– NapannSan
အစအနောက် လုပ်ထားရာကနေ တကယ် အသက်ဝင်လာ တဲ့… ဆရာမနိုင် ” ဘီလူးရုပ် “
By Ms.Yellow SanPosted on July 18, 2019
အစအနောက် လုပ်ထားရာကနေ တကယ် အသက်ဝင်လာ တဲ့… ဆရာမနိုင် ” ဘီလူးရုပ် ” ဟိုးလွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ( ၅၀ ) ခန့်ကပေါ့ကွယ်…။ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အညှာဒေသတစ်ခုမှာပေါ့..။ ရွာတွေ အများကြီး […]
အင်းစိန်ထောင် အတွင်း မှ ဂန္တဝင်လူမိုက်ကြီးများ -အပိုင်း (၁)
By Ms.Yellow SanPosted on July 18, 2019 July 18, 2019
အင်းစိန်ထောင် အတွင်း မှ ဂန္တဝင်လူမိုက်ကြီးများ -အပိုင်း (၁) ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ထုတ် တူမောရိုးဂျာနယ် မှာ ပြန်မရေးချင်တော့တဲ့ ထောင်အကြောင်း ကို ရေးလိုက်တော့ နိုင်ငံရေးမပါတဲ့ အင်းစိန်ထောင်က အကြောင်းတွေ ရေးစမ်းပါဦးလို့ တိုက်တွန်းတဲ့သူတွေ အများအပြားရှိခဲ့ […]
ပါးစပ်ဆော့မိသူများ.. (ြ ဖစ်ရပ်မှန် )
By Ms.Yellow SanPosted on July 17, 2019
ပါးစပ်ဆော့မိသူများ.. (ြ ဖစ်ရပ်မှန် ) “ဟျောင့်ဒေ,ငါ့ဂစ်တာပြန်ရွှိုင်းပြီးပြီ ” “အဟေ::::::::တကယ်လား ငနိုင်” “တကယ်ဟ,အာ့ ဆိုတော့ ခု ငါသောက် တဲ့စားတဲ့ဟာတွေမင်းတို့စုရှင်းပေး” “ ရှင်းပေးတယ်,ရှင်းပေးတယ် ” “ ဒါနဲ့,,,အတော်ပဲ,ငါ(,,,,,,,)အဆောင်က ဆော်လေး ကို […]
သူများမြေ ကို ခိုးမိလို့ ..သရဲဘဝနဲ့ ဝဋ်ကြွေးဆပ်ရတဲ့.. ကျောင်းကုန်းမြို့က ဒေါ်သိန်း.. (ဖြစ်ရပ်မှန်)
By Ms.Yellow SanPosted on July 16, 2019
သူများမြေ ကို ခိုးမိလို့ ..သရဲဘဝနဲ့ ဝဋ်ကြွေးဆပ်ရတဲ့.. ကျောင်းကုန်းမြို့က ဒေါ်သိန်း.. (ဖြစ်ရပ်မှန်) ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် ဒေါင့်ကြီး ကျေးရွာသည်စည်ကားသောရွာကြီးတရွာ ဖြစ်ပါသည်။တိုက်နယ် ဆေးရုံ၊ အ-ထ-က ကျောင်း၊ စည်ကားစွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသောကုန်စုံဆိုင်၊ အထည်ဆိုင်၊ တိုက်တာပေါများပြီး အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများနှင့် […]
ဝက်သားဟင်း နဲ့ ထမင်းမစားရလို့ ဒေါသထွက် တဲ့ လှိုင်သာယာက သရဲမ.. (ဖြစ်ရပ်မှန်)
By Ms.Yellow SanPosted on July 15, 2019
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၅) နှစ်ကျော် မှ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်း တစ်ခု…. ။ တစ်ချို့ကိစ္စတွေ က လက်တွေ့မဆန် လို့ မယုံဘူး လို့ ပြောလို့မရဘူး ၊ ကြားဖူးနားဝမို့မယုံပါဘူးကွာလို့ တထစ်ချ သတ်မှတ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေ လောက […]
ဗမာပယောဂဆရာ ကို မကြောက်တဲ့ မြောက်ဒဂုံ က တရုတ်တစ္ဆေ ( ဖြစ်ရပ်မှန် )
By Ms.Yellow SanPosted on July 14, 2019
ဗမာပယောဂဆရာ ကို မကြောက်တဲ့ မြောက်ဒဂုံ က တရုတ်တစ္ဆေ ( ဖြစ်ရပ်မှန် ) ဖြစ် ရပ်မှန် ကို အခြေခံထားပါသည် ။ ကျနော် ၏ အိမ် သို့ မတွေ့ တာ […]
ကေတီဗီ မှာ အခြောက်ကြမ်း တဲ့ သရဲမ
By Ms.Yellow SanPosted on July 13, 2019
ကေတီဗီ မှာ အခြောက်ကြမ်း တဲ့ သရဲမ သူများ အကြောင်းလေးပြောပြမယ်နော် မြို့နဲ့ ဆိုင်နာမည်ချန်ထားပါ့မယ်။ အဲ့မြို့ရဲ့ ktv လေး တစ်ခုမှာလေ အခန်းနံပါတ် ၁၃ က သရဲ ခြောက်တယ်တဲ့ လူပြောက တော်တော်များလာတော့ […]
” သချုင်္ိုင်းစောင့်မဖဲဝါ ထက် ကြမ်းတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းက သရဲမ “ မစံပယ် ” “
By Ms.Yellow SanPosted on July 12, 2019
” သချုင်္ိုင်းစောင့်မဖဲဝါ ထက် ကြမ်းတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းက သရဲမ “ မစံပယ် ” ” ကိုမြမိုး တို့ရွာ က ဧရာဝတီတိုင်း ၊ မြို့နယ်လေး တစ်ခု အတွင်း က ရွာကလေးတစ်ရွာ […]
စစ်သားတွေ ကို ခြောက်တဲ့ သရဲမ ..(ဖြစ်ရပ်မှန်)
By Ms.Yellow SanPosted on July 11, 2019
စစ်သားတွေ ကို ခြောက်တဲ့ သရဲမ ..(ဖြစ်ရပ်မှန်) ( ကိုအေးချမ်းအောင် ပြောပြတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါခင်ဗျာ ) ကျွန်တော်က စလုံးမှာနေနေတာပါ…. PR ( permanent residant ) ရထား တာ […]
“”ရခိုင်ရိုးမ တောနက်ကြီးထဲ ပျောက်ဆုံးသွားသော ဗြိတိသျှ တပ်ရင်းကြီး””
မူရင်း ရေးသားသူ —- ကပ္ပတိန် ၀န ( Wana Htike ) ( ကျွန်တော်တို့ အရင် က တစွန်းတစကြားဖူးနေတဲ့ အကြောင်းပါ ။ ဒီအကြောင်း နဲ့ ပတ်သတ် လို့ […]